Xildhibaanada Galmudug oo la sheegay in loo diiday kaarka Aqoonsiga - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Xildhibaanada Galmudug oo la sheegay in loo diiday kaarka Aqoonsiga
Xildhibaanada Galmudug oo la sheegay in loo diiday kaarka Aqoonsiga
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labaad ee Galmudug ayaa Risaala u xaqiijiyay in xubno ka mid ah Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ay diideen in ay bixiyaan Aqoonsiga, islamarkaana loo sheegay in mid ka mid ah Musharaxiinta Gudoonka baarlamaanka markii ay doortaan la siin doono.
Xildhibaanada ayaa sheegay in hadda aysan aheysan wax aqoonsi oo ku aadan in Cadeynta ah in ay yihiin Xildhibaano si ay u codeeyaan.
Walaac badan ayaa laga muujiyay sida lagu kala aqoonsan doono Xildhibaanada iyo dadka caadiga ah xilliga doorashadda Guddoonka baarlamaanka.
Musharaxiinta xilka Madaxweynaha Galmudug ayaa maanta sheegay dhankooda in xildhibaanada aysan heysan wax aqoonsi oo dhibaato badan lagu haayo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Xildhibaanada Shuruud looga dhigay doorashadda Mid ka mid Musharaxiinta xilka Gudoomiyaha baarlamaanka kadibna loo ogolaan doono kaarka.
Previous articleAl-Shabaab’s attacks come amid backdrop of West’s waning interest
Next articleSAWIRO:-Soomaaliya & QM oo ka wada hadley kordhinta taageerada